कान्ति अस्पतालमा उपचाररत १३ महिने शिशुलाई कोरोना संक्रमण, उपत्यकामा कोरोना भाइरस समुदायमा गए/नगएको पुष्टि गर्न थप १२०० जनाको स्वाब परीक्षण हुँदै ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कान्ति अस्पतालमा उपचाररत १३ महिने शिशुलाई कोरोना संक्रमण, उपत्यकामा कोरोना भाइरस समुदायमा गए/नगएको पुष्टि गर्न थप १२०० जनाको स्वाब परीक्षण हुँदै !
भारतीय सीमा जोडिएको जिल्ला र भारतबाट आएका नेपाली बसोबास गरेको क्षेत्रमा बढी कोरोना सङ्क्रमित फेला पर्दै आएकोमा त्यो क्रम विस्तारै उपत्यकामा सरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा विदेशबाट आएका नेपालीमा मात्रै सङ्क्रमण देखिँदै आएकोमा अहिले स्थानीय समुदायमा समेत देखिन थालेको हो । थप सतर्कता नअपनाए उपत्यकामा सङ्क्रमण जोखिम बढ्ने चिकित्सकको भनाइ छ